ယ့ၫၡုၬမွဲစဘံၭအမုလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭ. | Radio Veritas Asia
ယဝ့ၫဒၪယီၩ ယမွဲစဘံၭအမုလၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭတၭ, ယဖါမွဲၦခိၭစဘံၭအလးလီၫ.- ကယဲအထဲၩ့လၧယ လီၩ့လၧအလၥၪဘၪဝ့ၫနီၪ, မွဲအဖ့ၬခွံၬဝ့ၫတၭး ကယဲအထဲၩ့လၧအၥၪဝ့ၫနီၪ, ဘဲၫၥိၭအမိၥၪအၪထၪ့တၭ, မၩဆံၫ့ထၪ့ဝ့ၫဒၪလီၫ.- ဘိၩ့နဲၪ့ယီၩ မွဲလၧယလူလၧ ယလီၩဘၪနၥံၪအကၠီၩ့ယီၩ နၥံၪဆံၫ့ယူၭနၥံၪဝ့ၫလီၫ.
အီၪဂုးခၧၫ့နၥံၪဝ့ၫလၧယဖၧၩ့တၭ, ယမိအီၪဂုးခၧၫ့ယဝ့ၫ လၧနၥံၪအဖၧၩ့လီၫ. ဘဲၫထဲၩ့အ့ၪလအီၪဂုးခၧၫ့ဘၪဝ့ၫ လၧစဘံၭမုအလီၩ့နီၪ ၥၪဒၪအဆၧလၥ့ၪဘၪအၥိၭနီၪ, နၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩ နၥံၪအ့ၪလအီၪဂုးခၧၫ့ဘၪ လၧယဖၧၩ့တၭ, နၥံၪလၥၪဘၪဘဲၫနီၪအၥိၭလီၫ.-
ယဝ့ၫဒၪယီၩယမွဲစဘံၭအမုတၭ, နၥံၪမွဲအထဲၩ့လီၫ. ၦလၧအအီၪဂုးခၧၫ့လၧယဖၧၩ့, ဒဲယအီၪလၧအဖၧၩ့နီၪ, ၥၪဝ့ၫအၪဖျိၪ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ အ့ၪလမွဲဘၪလၧယကၠီၩ့တၭ, နၥံၪမၩဆၧၥ့ၪနးမံၩ့အ့ၬ.- ၦလဂၩဂၩ အ့ၪလအီၪဂုးခၧၫ့ဘၪဝ့ၫလၧယဖၧၩ့ယီၩ, ဘၪဆၧခွံၬၡိၭဝ့ၫဘဲၫ ဆၧအထဲၩ့အၥိၭတၭ, ဎဲၫ့ထၬခွံၬဝ့ၫဒၪလီၫ. ၦအၪ့ထုၫ့ကီၪ့အဝ့ၫၥံၪ ဖျႃၭလၩ့ဝ့ၫလၧမ့ၪဖၧၩ့တၭ, ဆူၭခဲၩထၪ့ဝ့ၫဒၪလီၫ.-
နၥံၪအ့ၪအီၪဂုးခၧၫ့လၧယဖၧၩ့, ဒဲယလူယထၫအီၪဂုးခၧၫ့လၧနၥံၪအဖၧၩ့တၭ, ထီးဒၪအဘၪ နၥံၪအၥၭလၧဆၧလမံၩ့လါလါနီၪ, အၪ့ကံၩ့ဆံၭ, တၭဆၧမိမၩလၧနၥံၪအဂးလီၫ. လၧနၥံၪၥၪထၪ့အၪဖျိၪ့အကၠီၩ့နီၪ, မွဲယဖါအလၩအဖၩ့အီၪဖျီၪဝ့ၫတၭ, နၥံၪမိကဲၪထၪ့ယထံၩယဖျဲလီၫ.